Ụlọ ọkụ na-emepụta gas, ebe a na-emepụta gas, ọkụ ọkụ maka gas ọdụ na ndị na-enye ihe na China
Nkọwa:Ụlọ ọkụ na-ekpuchi ọkụ,Ebe a na-akpọ Gas Station,Ogwe ọkụ na-enwu ọkụ maka gas ọdụ,Ebe a na-echekwa mmanụ ọkụ,,
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu Gas
Ngwaahịa nke Egwuregwu Gas , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ụlọ ọkụ na-ekpuchi ọkụ , Ebe a na-akpọ Gas Station suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ogwe ọkụ na-enwu ọkụ maka gas ọdụ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ihe eji eme ka ihe dị ọkụ na-acha ọkụ dị ọkụ 150W 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ Led 150w 5000k  Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri ihe ndị dị na kpụ ọkụ n'ọnụ 150W 18000LM  Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu kpochapu ọkụ ọkụ gas na-ekpuchi ọkụ 150W  Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri ọkụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ na-ekpuchi 150W  Kpọtụrụ ugbu a
Nnukwu Ugwu Dị Iche Iche Na-enwu Ugwu 100W  Kpọtụrụ ugbu a
Led Canopy Light Fixtures Retrofit Kit 150W  Kpọtụrụ ugbu a
Mpupu Igwe Mbara Igwe Ọkụ na Photocell 150w  Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri Ido Uhie Na-eme Ka E Nweta Gas Gas 150w  Kpọtụrụ ugbu a
100W Mgbanya ọkụ maka ebe gas gas 12000LM  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwá ọkụ ntanetị ọkụ nke Gas Station 130w  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwongwo gas na-acha ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ ọkụ 130W  Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ gas na-acha ọkụ ọkụ 130W 15600LM  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye anolọ Mọdụ gas 130W Gas  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe ọkụ ikuku CWpy 150W 200W  Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọkụ na-ekpuchi ọkụ ụgbọ mmiri 150W  Kpọtụrụ ugbu a
Ndozi Stationlọ Ọrụ Gas Nke Led Gas 150W  Kpọtụrụ ugbu a
130W Na-enwu ọkụ n'ọdụ ụgbọ mmiri  Kpọtụrụ ugbu a
100W Ikuku Ngwongwo nke Gas Gas 100W  Kpọtụrụ ugbu a
60W Egwuregwu Ngwá Agha nke Ọma 7200LM 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Ogwe Ubi Elu Ubi Elu nke Ugwu 60W nke Ugwu  Kpọtụrụ ugbu a
Ebube anyị na-ekpuchi ọkụ 150w bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na-ekpuchi ọkụ ọkụ 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ìhè Ìhè nke Na-enwusi Ike nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka...
Ọnyà anyị n'okpuru ọkụ ọkụ 150w bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a dị 12x12 Ejiri Ìhè dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Obere Uhie Led Square nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka...
Anyị na-ekpuchi ọkụ na-enwu enwu bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a nwere ike ịgbanye ọkụ ọkụ 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Okwunigwe ndị a na-ahụ maka ebe obibi Home Depot nwere 60W, 100W, 130W...
Ihe ntinye ego anyị nwere ike ịbanye bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Igwe ọkụ ndị a na-acha ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ngwá ngwongwo dị n'elu ụlọ nwere 60W, 100W,...
Igwe ihe ntụgharị anyị na- agba gburugburu bụ IP65, nke a kwadebere maka ọdụ gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na-enye ìhè ọkụ na-ekpuchi ọkụ 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ikike Mgbachi nke Aghaghachị nwere 60W, 100W, 130W na...
Okpokoro Mgbachi nke Amazon Amazon bụ IP65, nke e mere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a nwere ike ịgbanwu 100w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ndị na- eburu ọkụ ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ....
Onyinye anyị na-ekpuchi ekpuchi bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a nwere ike ịgbanwu ọkụ ọkụ 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Echiche ọkụ ndị ahụ nwere ike inwe 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche...
Ebe nchekwa anyị na-ekpuchi ọkụ bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a Mpupu Mpupu Ike 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ìhè ahụ dị na Photocell nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche maka nhọrọ....
Ike Igwe Anyị 150w bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na- awụpụ ụgbọ oloko 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ihe mkpuchi na ìhè nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ike Igwe...
Oyiyi anyi nwere ike ime ka ikuku gas bu 10065 bu IP65, nke emere maka ikuku gas na ebe ndi ozo. Ike Igwe Igwe a dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ihe na- enwu gbaa nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ube...
Ngwurugwu anyị maka oge ìhè bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na ntanye ọkụ nke a dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ebube ọkụ na-eburu ya nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ike...
Ụlọ ọrụ gas anyị bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a Vintage Gas Station Light Fixtures dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Mgbachi ọkụ na-egbuke egbuke nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka...
Ụlọ ọrụ gas anyị Light Station Fit bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a Gas Station Light Fixtures 130w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ogwurugwu Gas Station Light Fitting nwere 60W, 100W, 130W na 150W...
Ọdụ Gasgbọ Gas Gas anyị nwere IP65 bụ nke a rụrụ maka ikuku gas na ebe ndọba ụgbọala. Ndobe ntinye gas nke 130w Gas ebe a Ọ dị mma maka nrụnye. Ndị na- eweta gas na-ebute ndị na-eweta ọkụ ọkụ ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche maka ịhọrọ....
Ebe anyị na-edebe ọdụ ụgbọ oloko Led Gas bụ IP65, ahaziri iche maka ọdụ gas na ebe ndọba ụgbọala. Nke a 200w Led Gas Station Canopy Light Ọ dị mma maka nrụnye. Stationlọ ọrụ gas na-ebute ndozi ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche maka...
Ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri anyị dị na Gas 150W bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Ụlọ Osimiri Gas a dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ụlọ ọkụ gas na-ere ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ....
Igwe ọkụ mkpuchi gas anyị na-adọba ụgbọala IP65 bụ IP65, ahaziri iche maka ọdụ gas na ebe ndọba ụgbọala. Nke a Led Gas Station Light 150w Ọ dị mma maka nrụnye. Ndozi ebe a na-edebe Gas nke Gas nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche maka ịhọrọ....
Ụlọ ọrụ gas anyị bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Ụlọ Ọrụ Ntanetị Ọrụ a dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ụlọ ọkụ Led Gas ọdụ ụgbọ oloko nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ụlọ ọrụ ọrụ...
Ebe anyị na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri Gas 100W bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a Gas Station Light Fixtures 100W dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Mmiri Ndị Na-ahụ Maka Ọkụ Mmiri nke 100W na 100W nwere 60W,...
Ụlọ ọrụ gas anyị 60W bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Ụlọ Osimiri Gas a dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Egwuregwu Gas na-acha ọkụ ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ebe anyị na-...
Ogwe Ubi Elu Ubi Elu nke Ugwu 60W nke Ugwu Ụlọ ụgbọala anyị na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala jiri ogo ikuku 3030 Diana Chip, nwere ike iguzogide oke elu ma na-ekesa nchawa. Ebe a na- acha ọkụ eletrik na- eji ọkwọ ụgbọ elu dị elu, na asambodo CE...
China Egwuregwu Gas Ngwa
Egwuregwu Gas e mere maka aka ike n'èzí gburugburu, ịzọpụta ruo 75% na ume usage.Our Gas Station kanopi Ìhè nwere ike ukwu belata ọkụ mmezi na nnọchi na-akwụ ụgwọ maka gị owuwu. Ebe a na-akpọ Gas Station enwere ike ime ihe n'ime ime ụlọ ma ọ bụ ọkara n'èzí n'èzí, dị ka ụlọ mposi ime ụlọ, ụgbọ elu gas, Stairwells, Passageway . Ebube a na-enwu ọkụ maka Gas Station bụ Ugwu Ugwu, ọ dịkwa na igbe ntanye 150W 16050lm N'èzí na-ere ahịa Weatherproof High Bay Carport Driveway Ceiling Light 5700K. Ebe a na-echekwa mmanụ ọkụ bụ DLC ruru eru ma si otú ahụ ruo eruo maka mmemme nchịkwa obodo na mba niile. Nke a 150w LED Canopy Light gives 16050 Lumens at 5000K cool white. Ọ na-eji ihe dịka 2835 Dịlị na arụmọrụ ọkụ 130lm / w, dị mma iji dochie anya ọdịnala nke 400-750w, ike Ịkwụ ụgwọ ihe ruru pasent 70 karịa oge ndụ anyị .Ọ zuru oke maka ebe ọ bụla Damp or Wet. Na - eguzogide Rust, Corrosion, Cracking na ihe ọ bụla Ọdụdọ Ọdụdọ ma ọ bụ ọkụ n'ihi Mmiri. Nke a nwere ike ịmepụta ihe dị mma maka ngwa n'èzí dị ka ebe ndị gas, ọdụ ụgbọ oloko, ụgbọ mmiri, ebe ntinye ego, ụlọ nkwakọba ihe, nbata, ọdụ ụgbọ mmiri, wdg. usoro ngwugwu bụ ngwọta kachasị elu. N'igosi ihe edere IP65 na mkpuchi nchebe iji gbochie mbibi, ebe mkpuchi ikuku anyị ga-enwu gbaa n'agbanyeghị ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Usoro a na-eme ka ogwe ọkụ gas, oghere, ebe a na-adọba ụgbọala na ebe ndị na-adọba ụgbọala na-enye ìhè. Ihe eji eme ihe a na-eme nke ọma na-adịgide adịgide. Ọdịdị ìhè dị elu na-egbuke egbuke na-eme ka ọkwa ọkụ dị elu na nnukwu nchekwa ọkụ dị ukwuu .Ọrụ dị elu 5000K, 80 + CRI na-adabere na ígwè ọrụ isi eletriki na ikpo ọkụ ọkụ nke aluminum kpuchiri ezigbo njedebe okpomọkụ na ogologo ndụ.
Ụlọ ọkụ na-ekpuchi ọkụ Ebe a na-akpọ Gas Station Ogwe ọkụ na-enwu ọkụ maka gas ọdụ Ebe a na-echekwa mmanụ ọkụ Ụlọ ọkụ na-ekpuchi ọkụ na gas